‘बा’ले सफल होइन, असल बन्ने मन्त्र सिकाउनु भा’छ’ – Nepali Profile
‘बा’ले सफल होइन, असल बन्ने मन्त्र सिकाउनु भा’छ’
बिशाल अर्याल ३ भाद्र २०७७, 8:12 am
जब म सानो थिएँ । मेरा बा’ कामको शिलशिलामा कतै जानुहुन्थ्यो । अनि म बालाई रातिसम्म कुर्ने गर्थेँ । म जान्दिन थिएँ बा’को काम बन्थ्यो या बन्दैन थियो । तर, मलाई देखेपछि बा’ जहिले मुस्कुराउँदै झोलाबाट बिस्कुट, मिठाई (खानेकुरा) झिक्नुहुन्थ्यो ।
आज समयले लामो कालखण्ड बितायो । बिस्कुट, मिठाई … खाने त्यो छोरा अब कलेज पढ्ने भयो । मुस्कुराउने त्यी बा’का गालाहरुमा बुढेसकालका बक्र रेखाहरु सल्बलाउन थाले । समयको खेल भनौं या जमानाको । हिजो मैले बालाई कुर्थेँ । आज बा’ मलाई कुर्नुहुन्छ । बा’ त्यो ओझेल पारिएको पात्र हो जो साहित्य र गीतसंगीतमा विरलै प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले कवयात्री निरा शर्माले भनेकी छन् ‘आमालाई धर्ती भन्नेहरुले कहिल्यै बालाई आकाश भनेनन् ।’ सायद बा’को प्राकृतिक बनोट र जिम्मेवारीले पनि होला बा’ द्वन्द्वात्मक पात्र जस्तो देखिन्छन् ।
हो बा’ हारिरहे । को सँग हारेनन् र बाले ? कहिले आमासँग हारे । कहिले छोराछोरीसँग हारे । कहिले समाजसँग हारे र सबैभन्दा बढी बा’ आफैसँग हारिरहे । बा’ कहिले ईमान्दार बनेन् आफैसंँग ।
कुन बा’ले नचाहेका होलान् र आफ्ना सन्ततिका इच्छा परिपूर्ति गर्न । तर बा’ विवश छन, बा’ घेरिएका छन् सयौं कुराहरुले । त्यसैले होला बा’को हृदयले नचाहँदै गर्दा पनि बा’को मुखमा बाध्यतामा छ ‘नाइ’ भन्न ।
समयले आज कोल्टे फेरेको छ । तर बा’का कथा उही छन् । बा’ले छोराछोरीका सपनासँग आफ्ना पसिना साटिरहेछन् । आफ्ना सपना बन्धकीमा राखेका छन् । थुप्रैका बा’ छुनु र मुनुको खाना र नानाका लागि मुग्लान भासिए । पोल्नुपर्ने बा’को खुइलिएको तालुमा जेठको घामले । छिर्नुपर्ने माघको चिसो च्यातिएको ज्याकेटबाट । तर बा’लाई न त पोल्यो न त गलायो । बा’ त बगिरहेछन् उही अविरल इन्द्रवती झै । सहेरै अनेकन आँधी र भेरी ।
बा’को गतिशीलताले मलाई अचम्मित बनाउँछ । मलाई थाहा छ, बा’का गोडाले बा’लाई साथ दिन अन्कनाइरहेका छन् । बा’ चिप्लिनुहुन्छ आजभोलि भारी बोक्दा । म लक्काजवान र पनि बा’ले कहिले बोकाएनन् मलाई गह्रौं भारी । बा’ले घाँसको भारी मात्रै पनि होइन । समयसँगै र मेरो हुर्काइसँगै तमसुक पत्रको भारी पनि अचेल ठुलै बोक्न थालेका छन् । राम्रोसँग बुझेको छु बा’को तलब के कति हुन्छ । तर अहँ ! बा’ कहिले झर्किएनन् । बा’ आज साथीसँग घुम्न जानु छ । बा’ मलाई नयाँ जुत्ता चाहिएको छ । बा’ मामाघर जानु छ । बा’ कलेजको फि । यस्तै यस्तै प्रश्नहरु फेरिरहन्छु म । तर, बा’को उत्तर जहिले उही हुन्छ, हस् छोरा कति चाहियो ? बा’ पनि त मान्छे नै हुन् । जब मेरा इच्छाहरु हुन्छन् भने बा’का पनि किन नहुन् । बा’ पनि त चाहन्थे होलान् आमालाई मखमलको चोली र फाइबरको साडीमा सजाएर आफु सुटेड र बुटेड भएर राराको त्यो काख र आमाको साथमा सुस्केरा हालेर आनन्दको सास फेर्न । रारा त के घरको छेउमै रहेको कालीको वगरमा बसेर आनन्दको सास फेर्ने फुर्सद पाएनन् ।
छिमेकी काका छोराले अष्ट्रेलिया बोलाएर जाँदै गर्दा बसपार्कसम्म छोड्न पुगेका मेरा बा’लाई पनि त रहर होला एकपटक अष्ट्रेलिया घुम्ने । तर, आफ्ना सबै सपनाहरुलाई लत्याईदिए सायद छोराले गर्ला, छोरीले गर्ली भनेर । बा’ रुदैनन् भन्ने जस्तो लाग्थ्यो सानोमा । तर म सरासर गलत थिएँ । दिदीलाई अन्माएको दिन सबैभन्दा बढी कोही रोएका थिए भने त्यी बा’ नै थिए प्रकृतिले नै आमा बा’लाई फरक–फरक जिम्मेवारी दिएको छ । तर सधैँ बा’ छत्रछायाँमा परिरहे । एकपटक सोध्नु मन छ साहित्यकारहरुलाई आमाको ममता लेख्ने तिमीहरुले बाका गाली किन लेखेनौ ? जुन गालीले तिमीलाई यस लायक बनायो । सोध्नु मन छ त्यी चेलीलाई आमाको फाटेको चोली देख्ने तिमीले कसरी देखिनौ फाटेको बा’को टोपीलाई ? र अन्तिममा सोध्नु छ त्यो छोरोलाई तिम्रा लागि दुनियाँका अनेकन लघुताभास र लाञ्छना सहेरै सधैँ सधेँ तिमीसँग हारेका त्यी बा’लाई किन रुवाउँछौ बुढेसकालमा ?
बा’ पनि त चाहन्थे होलान् आमालाई मखमलको चोली र फाइबरको साडीमा सजाएर आफु सुटेड र बुटेड भएर राराको त्यो काख र आमाको साथमा सुस्केरा हालेर आनन्दको सास फेर्न । रारा त के घरको छेउमै रहेको कालीको वगरमा बसेर आनन्दको सास फेर्ने फुर्सद पाएनन् ।
हो बा’ हारिरहे । को सँग हारेनन् र बाले ? कहिले आमासँग हारे । कहिले छोराछोरीसँग हारे । कहिले समाजसँग हारे र सबैभन्दा बढी बा’ आफैसँग हारिरहे । बा’ कहिले ईमान्दार बनेन् आफैसंँग । सायद बा’ आफैसँग ईमान्दार बन्थे भने हाम्रा बा’ पनि अरु देशका बा’हरु जस्तै हाफपाइन्ट लगाएर कोक पिउँदै डुल्थे होलान् युरोप र अमेरिकामा जस्तै ।
फर्किएर हेर्याैं भने जीन्दगीका हर कुरा हिजो जस्तै लाग्ने रहेछ । बा’को काँध चढेर गाउँ डुलेको अस्ति जस्तै लाग्छ । बाले थप्पड लगाएपछि बा’का विरुद्ध आमाको अदालतमा उजुरी नहालेको पनि अचेल धेरै भएछ । हिजो बा’लाई नबुझेर एउटै प्रश्न पटक–पटक सोध्ने छोरोका जिज्ञासा आजभोलि गुगलले मेटाउन थालेछ । एकपटक अनुरोध गर्नु मन छ त्यो निष्ठुरी समयलाई ।
ए समय तँ यति विघ्न गतिशील पनि नबनि दे न ! हिजो बा’लाई बुझ्दिन थिएँ र सधैँ टाढा टाढा रहिरहेँ । आज बा’लाई बुझ्छु तर समयले एउटा यस्तो मोडमा अल्झाएको छ कि बा’लाई बुझेर पनि लाचार बनिरहेछु ! मलाई अझै पुगेको छैन बा’लाई घोडा बनाएर । बा’लाई साइकल किनिदिनु भनेर झगडा गरेर । अनि बा’को स्वादिलो थप्पडले रोएर । तर जीन्दगीलाई मन्जुर रहेनछ क्यार हिँडिसकेको बाटो फेरि हिँड्नु । हिजो जे भयो सो भयो । बा’ यत्ति भन्छु अब दबिएको तिम्रो मुस्कान झरीपछि उघ्रिएको आकाश जस्तै खुल्ने छ । यति सबै कुरा भन्दै गर्दा बा’ तिम्रो यो छोरालाई आजभोलि प्रत्येक रात एउटै कुराले पिरोलिरहन्छ कतै योग्य पिताको सुयोग्य पुत्र बन्न सकिन भनि ?
ह्याप्पी फादर्स डे बा !